बार्सिलोनामा मेस्सीको बसाइ सकिएकै हो त ? – Sandesh Munch
बार्सिलोनामा मेस्सीको बसाइ सकिएकै हो त ?
१५ भदौ, काठमाडौं । स्टार खेलाडी लिओनल मेस्सीले स्पानिस क्लब बार्सिलोनासँग आफ्नो सम्झौता सकिएको विश्वास राखेका छन् । उनले क्याम्प नोउसँग आफूलाई टाढा राख्न थालेका छन् ।
३३ वर्षीय अर्जेन्टाइन कप्तान मेस्सी सोमबारको प्रशिक्षणमा समेत सहभागी नजनाउने भएका छन् । यसअघि आइतबार कोरोना परीक्षण नगराएका मेस्सी प्रशिक्षणमा समेत उपस्थित भएनन् । यसलाई मेस्सीको क्लब छाड्ने अर्को स्टेपको रुपमा अघि बढेको गोल डट कमले जनाएको छ ।
यस्तै मेस्सीले क्लबसँगको सम्झौता अब सकिएको विश्वास गरेको पनि गोल डट कमले जनाएको छ ।
मेस्सीले गत मंगलबार क्लबका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै आफूले क्लब छाड्न लागेको जानकारी गराएका थिए । जसले गर्दा विश्व फुटबलमा तरंग छाएको थियो । सिधा हेर्ने हो भने बार्सिलोनामा मेसीको सम्झौता अझै एक वर्ष बाँकी छ र क्याटलान क्लबले तयसअघि मेसीले क्लब छाड्न चाहे ७०० मिलियनको युरो रिलिज क्लज तोकिदिएको छ ।
तर अहिले मेस्सी र बार्सिलोना पक्षबाट यसको फरक-फरकरुपमा व्याख्या हुन थालेको छ । मेस्सीले आफ्नो सम्झौता अनुसार र रिलिज क्लज तोड्न पाउने बताउँदै आएका छन् भने क्लबले मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न अन्य क्लबले ७०० मिलियन युरो नै तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।
यस्तै पछिल्लो पटक ला लिगाले समेत मेस्सीलाई कसले अनुबन्ध गर्न चाहे रिलिज क्लज बराबरको रकम तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।
अहिलेको यथार्थ के हो भने पछिल्लो समय क्लब र मेसीबीच दूरी बढिरहेको छ । च्याम्पियन्स लिगमा बायर्नसँग ८-२ को लज्जासपद हारलगायत क्लब प्रशासनसँग असन्तुष्ट रहेका मेस्सीले क्लब छाड्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि मेस्सी बार्सिलोनामै बस्छन् वा अन्य कुनै देशको क्लबको जर्सी लगाउनेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।onlinekhabar
Prevनुवाकोट घर भएका दुई महिला कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सम्पर्कविहीन भएका छन्
Nextकोरोना संक्रमणबाट वीरगन्जमा थप एक वृद्धको मृ त्यु
काठमाडौं उपत्यकामा ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि